KULMIYE Party » Murrashaxa Madaxweynaha Xisbiga KULMIYE oo si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanada Sibidhley , Dhagaxdheer, Candhadhexe iyo Dharyalay Murrashaxa Madaxweynaha Xisbiga KULMIYE oo si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanada Sibidhley , Dhagaxdheer, Candhadhexe iyo Dharyalay – KULMIYE Party
Murrashaxa Madaxweynaha Xisbiga KULMIYE oo si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanada Sibidhley , Dhagaxdheer, Candhadhexe iyo Dharyalay
HomeMurrashaxa Madaxweynaha Xisbiga KULMIYE oo si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanada Sibidhley , Dhagaxdheer, Candhadhexe iyo Dharyalay
Dharyalay (Warbaahinta KULMIYE )Murrashaxa Jagada Madaxweynenimo ee Xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi iyo Wefti miisaan culus leh oo uu hoggaaminayo ayaa si heersare ah loogu soo dhaweeyay deegaanada Sibidhley , Dhagaxdheer , Candhodhexe iyo Dharyalay oo dhamaantood ka tirsan Gobolka Togdheer.
Weftiga Guddoomiyaha xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo Weftiga uu hoggaaminayo oo ka koobnaa wasiiro Xildhibaano u jeedkoodu ahaa dardargalinta iyo dhiirigalinta bulshada si ay u qaataan kaadhka codbixinaya ayaa dadweynaha deegaanadaasi kala kulmay soo dhaweyn aan hore loo arag oo ay ka muuqatay xiisad iyo Xamaasad dheeraad ah.
Odayaasha deegaanka Degaanka Dhagaxdheer ayaa khudbado jeediyay ayaa sheegay inay deegaankani guud ahaanba taageersan yihiin Xisbiga KULMIYE iyaga oo wax laga xumaado ku tilmaamay xubno sheegtay deegaankani oo sheegay inay ku biireen xisbiyo kale.
Jiif Caaqil Barkhad Cabdi Shaybe iyo Guddoomiyayaasha Sibidhley , Dhagax dheer iyo Dharyalay ayaa sheegay inay deegaanadani yihiin aas aasayaashii Xisbiga KULMIYE isla markaasna ilaa inta uu jirayo xisbiga KULMIYE ay ku jirayaan oo aanay meelo kale hunguri ka hayn.
Jiif Caaqil Barkhad Cabdi Shaybe ayaa yidhi “ deegaankan iyo beeshani waa KULMIYE weyna ahaandoontaa ilaa inta uu KULMIYE jiro , Dhalinyaradda meelahaa laga soo ururiyay ee inta laba la garanayo xagga hore lasoo fadhiisiyay ma meteli karaan beesha deegaankan.”
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE oo dadweynaha kala hadlay deegaanadaasi ayaa ku wacyigaliyay inay kaadhka qaataan waxaanna uu sheegay in aannu Xisbiga KULMIYE baqdin ka qabin inay ka guulaysaan Xisbiyada Mucaaradka ahi waxanna uu sheegay inay Xisbiga WADDANI aannu wali isla qabsan.
Guddoomiyaha KULMIYE ayaa dadweynah kula shaaheeyay deegaanka dharyalay halkaasi oo uu markii dambe kormeeray goobaha laga qaadanayo kaadhka codaynta waxaana uu bulshada ugu baaqay inay kaadhka qaataan.